သူတို့၏မီဒီယာရွေးချယ်မှုများမှဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေခြင်းပုံစံ (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
J ကိုလိင် Res ။ 2011 Jul;48(4):309-15. doi: 10.1080/00224499.2010.497985.
Bleakley တစ်ဦးက, Hennessy M က, Fishbein M က.
ဆက်သွယ်ရေး, Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Philadelphia တွင်, PA19104, အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် Annenberg ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒစင်တာ, Annenberg School တွင်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အစီရင်ခံစာ adolescents သောအတိုင်းအတာပေါ်တွင်ဤစာတမ်းအစီရင်ခံစာများ တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံ မီဒီယာထဲတွင်, မီဒီယာသူတို့ရှာကြံ၏အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြရာကနေသတ်မှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုရှာခြင်းနှင့်အကြားအသင်းအဖွဲ့မီဒီယာရင်းမြစ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတက်ကြွရှာအပြုအမူ၏သမာဓိမော်ဒယ်သုံးပြီးထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာရှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ကြောင်းပြသခန့်မှန်း ဘီဘာအိုတစ်အကြောင်းပြချက်အရေးယူချဉ်းကပ်။ T ကသူက data တွေကို 810-13 နှစ်ပေါင်းအသက် 18 မြီးကောင်ပေါက်များ၏အမျိုးသားရေးနမူနာများမှာ။ ရလဒ်များမြီးကောင်ပေါက်များ၏ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတက်ကြွစွာရုပ်ရှင်များ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဂီတ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မဂ္ဂဇင်းများပါဝင်သည်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာရွေးချယ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံအစီရင်ခံကြောင်းပြသပါ။ ယောက်ျားအမျိုးသမီးနှင့်ကျား, မကွဲပြားမှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကနေရှာကြံများအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးခဲ့ကြသည်ထက်ပိုလိင်အကြောင်းအရာရှာ၏။ Path ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှာကြံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကောင်းစွာရှာခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအဓိကအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာရိပ်မိစံတန်ဖိုးဖိအားများကမောင်းနှင်နေကြသည်ရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်ခန့်မှန်းကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမကြာခဏလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်ဘို့အန္တရာယ်များ, HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုနှင့် / သို့မဟုတ် unplanned ကိုယ်ဝန်အားဖြင့်စိတ်မချရသောဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်အများအပြားအချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူထုအမြင် (Hennessy et al ။ , 2008) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား (Bleakley et al ။ , 2008; ဘရောင်း et al ။ , 2006; Collins, 2005; Hennessy et al ။ , 2009; သည် L'Engle et al ။ , 2006; Somers & Tynan, 2006) မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်နှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏တိုးတက်မှုအဖြစ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အတိုင်းအတာများနှင့်အချိန်ကိုက် (နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုAubrey et al ။ , 2003) နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်အကွာအဝေး။ (Bleakley et al ။ , 2008; ဘရောင်း et al ။ , 2006; Collins, 2005; Hennessy et al ။ , 2009; သည် L'Engle et al ။ , 2006; Somers & Tynan, 2006) ။ ရုပ်မြင်သံကြား (ဥပမာလိင် oriented အမျိုးအစားများသို့မဟုတ်တိကျတဲ့အစီအစဉ်များ) အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ exposure လည်းလိင်, သက်တူရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားအမြင်နှင့်လိင်အကြောင်းကိုအလိုလိုသဘောထားများ (အကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Annenberg မီဒီယာ Exposure သုတေသနအဖွဲ့ (AMERG), 2008; Ashby et al ။ , 2006; ဘရောင်း & မျက်နှာသစ်, 1991; ဘရောင်း et al ။ , 2006; Collins et al ။ , 2009; Pardun et al ။ , 2005; ရပ်ကွက်, 2002; ရပ်ကွက် & Friedman, 2006).
Little ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောအချက်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ Bleakley et al ။ ပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံ, ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သူတို့မီဒီယာအတွက်လိင်ထိတွေ့ခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးသူတို့မီဒီယာအတွက်လိင်ထိတွေ့နေကြ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်ဆံရေးဟာတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်သရုပ်ပြ ယင်းထက်ပိုနိုင်ဖွယ်သူတို့ (မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးတက်ပြီဖြစ်ကြောင်းBleakley et al ။ , 2008) ။ ပိုသမားရိုးကျ "မီဒီယာသက်ရောက်မှု" ရှုထောင့်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက် (တစ်အပြုအမူအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများ၏ကုသမှု, အပြုအမူအပေါ်ထိတွေ့သက်ရောက်မှုခန့်မှန်းခြင်းမှသုတေသနအာရုံကိုပြောင်းရွှေ့ရသည်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုများအကြားတစ်ပြိုင်နက်အာရုံစိုက်Slater, 2007) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့တစ်ဦးချင်းစီ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်တစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးသုတေသနအတွက် "အသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်" ပါရာဒိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးပုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုနားလည်သဘောပေါက်များအတွက်သင့်လျော်သောမူဘောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်ဘယ်လိုမီဒီယာရွေးချယ်မှုအတွက်လိင်ရှာကြံဖို့ထိတွေ့မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု (ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူကိုထိခိုက်Katz et al ။ , 1974; Ruggiero, 2000) ။ အဆိုပါအသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်ချဉ်းကပ်၏ယူဆချက်တစ်ခုမှာမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်လှုံ့ဆော်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်: လူတွေကိုတိကျတဲ့မီဒီယာကို select နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, အကျိုးစီးပွားများနှင့်ဦးစားပေးကျေနပ်အောင်ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သူကိုတက်ကြွစွာပရိသတ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ဒီရှုထောင့်ကနေအတိုး၏မှီခို variable ကိုတစ်ဦးဆက်သွယ်ရေးအပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာ, မီဒီယာအသုံးပြုမှုကို) ကနျြးမာရေးအပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်အဖြစ်တာကသုတေသနပြုပါရာဒိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့ဤမျှလောက်တစ်ဦးရှင်းလင်းသီအိုရီမဟုတ်ပေမယ့်, မီဒီယာသက်ရောက်မှုသုတေသနသို့ယင်း၏သဘောတရား၏ဆွဲသွင်းပါဝင်ပံ့ပိုးသောစာပေ၏ခန္ဓာကိုယ် (ရှိRubin က, 2002) ။ အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ် (Katz et al ။ , 1973) နှင့်ဘာသာရေးရုပ်မြင်သံကြား၏အသုံးပြုမှုအပေါ်သုတေသနအစီရင်ခံစာများ (Abelman, 1987), အင်တာနက် (ko et al ။ , 2005), အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားရှိုး (Papacharissi & Mendelson, 2007), နှင့်ရေဒီယို (Albarran et al ။ , 2007), အားလုံးမီဒီယာတွေရဲ့ array ထဲကနေရွေးချယ်ခြင်းတက်ကြွစွာပရိသတ်ကို၏အဖြစ်မှန်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမှလျှောက်ထားသကဲ့သို့, အသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်ပါရာဒိုင်းတချို့ဆယ်ကျော်သက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမီဒီယာလိင်မှတိုးမြှင့်ထိတွေ့မှု, သူတို့ရဲ့မီဒီယာရွေးချယ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထွက်ရှာသောယူဆတယ်။ အများအပြားကသုတေသနလေ့လာမှုများငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်မီဒီယာရင်းမြစ်များမှလိင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရတဲ့သတင်းပို့ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Bradner et al ။ ဖြေဆိုသူ (အသက်၏ 22-26 နှစ်ပေါင်းစဉ်အခါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အထီးအမျိုးသားစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုBradner et al ။ , 2000) ။ ကိုးဆယ့်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကမီဒီယာ (ရုပ်သံ, မဂ္ဂဇင်းများ, ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအဖြစ်သတ်မှတ်) မှ AIDS ရောဂါအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရတဲ့အစီရင်ခံ, 59% အက်စ်တီအိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်မီဒီယာကိုသုံးပြီးဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် 78% ကွန်ဒုံးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်မီဒီယာကိုသုံးပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တက်ကြွစွာရှာသို့မဟုတ် passive ထိတွေ့မှုကနေခဲ့ပုံကိုမီဒီယာရင်းမြစ်များမှလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအများကြီးမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားလေ့လာမှုမှာတော့ 57 ဟာ Philadelphia တွင်ဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာအနေဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏% (N ကို = 459) (မီဒီယာကနေလိင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူအစီရင်ခံတင်ပြBleakley et al, 2009) ။ လိင်နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်မီဒီယာကိုသုံးပြီးသတင်းပေးပို့သူတို့တွင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်အရှိဆုံးသိကောင်းစရာများအဖြစ်ကိုးကားခဲ့သည်။
နှစ်ခုသာလေ့လာမှုများမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထိတွေ့ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ကင်မ် et al နေဖြင့်တစ်ဦးကလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတိုးမြှင့်ထိတွေ့အပြုသဘောမိတ်ဆွေများကိုလိင်၏ခွင့်ပြုချက်, noncoital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, အိပ်ခန်းထဲမှာရုပ်မြင်သံကြားရှိခြင်း, ကျောင်းပြီးနောက် unsupervised အချိန်, အားကစားအတွက်ပါဝင်မှု, ရုပ်မြင်သံကြား၏တက်ကြွကြည့်ပျမ်းမျှရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုဖို့လှုံ့ဆျောမှုကဲ့သို့သော variable တွေကိုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသက်, လူမျိုး, နှင့်ကျား, မ (အဖြစ်အတော်ကြာလူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများထဲကနေလေ့လာသင်ယူကင်မ် et al ။ , 2006) ။ ခန့်မှန်းသည်ဤရလဒ်များကိုနှင့်ကိုက်ညီသကဲ့သို့အားလုံးမဟုတ်တွေ့ရှိချက်များ၏ပုံတူကူးယူခဲ့ကြပေမယ့်လည်း, စိတ်ပညာလူမှုရေး variable တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက် (Bleakley et al ။ , 2008) ။ အဲဒီနှစျခုလေ့လာမှုများထက်အခြားသုတေသီတစ်ဦးအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ဆုံးအဖွတျအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာသိ အပြုအမူ ပင်လျော့နည်းအထူးသစုစုပေါင်းလိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထုတ်ရှာကြံအကြောင်းကို။
အပြုအမူဘီဘာအို၏သမာဓိမော်ဒယ် (မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ရှာ၏ Self-ညွှန်ကြားအပြုအမူကိုနားလည်နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကဒီမှာကိုအသုံးပြုသည်Fishbein & Ajzen, 2010) ။ မော်ဒယ်အရတဦးတည်းအမြဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေကြောင့်အဦးတည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ပြုမူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါပေမယ့်, အပြုအမူအဓိကအား, ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပြီးသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်၏မရှိခြင်းမဖြစ်နိုင်မဟုတ်မယ်ဆိုရင်စွမ်းဆောင်ရည်ခက်ခဲစေလိမ့်မည်။ တိကျတဲ့အပြုအမူဖျော်ဖြေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တစ်ဦးတည်းရဲ့မကျြနှာ၏ function ကိုပါသို့မဟုတ်အပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်နေသဘောထား) ဖျော်ဖြေဆီသို့ဦးတည်နှိုင်းဖြစ်ပါသည်, အခြားသူတွေထင်သောအရာကိုအကြောင်းကိုသဘောထားအမြင်နှင့်အပြုအမူဖျော်ဖြေပတ်သတ်ပြီး (ဆိုလိုသည်မှာ, စံတန်ဖိုးဖိအား) နှင့်တရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပြုသဖြင့်, ဒါကြောင့် (ဆိုလိုသည်မှာ Self-ထိရောက်မှု) လုပ်နေတာမှအတားအဆီးများကို၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်အပြုအမူလုပ်ဆောင်။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, Integrated မော်ဒယ်တက်ကြွစွာရှာကြံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်နှင့်အပြုအမူဖျော်ဖြေဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေ, စံတန်ဖိုးဖိအား, နှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုအကောင်းဆုံးတက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာတုံ့ပြန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မည်ဟုမည်ယူဆတယ်။ ဤစာတမ်း (1) အစီရင်ခံစာ adolescents သောအတိုင်းအတာပေါ်တွင်ဒေတာကိုတင်ဆက် တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံ မီဒီယာ, (2) သူတို့ရှာကြံသတင်းပို့သောမီဒီယာကနေသတ်မှတ်, (3) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုရှာနှင့် (4) အကြားအသင်းအဖွဲ့အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာရင်းမြစ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏တက်ကြွစွာရှာခြင်းဖြင့်ရှင်းပြပုံကိုကောင်းစွာဆုံးဖြတ်သည်ခန့်မှန်း ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများရှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို။
တစ်ဦး 810-13 မိနစ်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့ 18-15 နှစ်ရှိပြီမြီးကောင်ပေါက် (N ကို = 20) အသက်အရွယ်မရွေးတစ်ဦးကနမူနာ။ နမူနာဖြေဆိုသူတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ် panel ကိုရရှိရန်ကျပန်းဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုသုတေသနကုမ္ပဏီ (အသိပညာကွန်ယက်) မှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ သုံးလတစ်ကြိမ် updated အဆိုပါနမူနာဘောင်, ညီညွတ်သောပြည်နယ်တယ်လီဖုန်းလူဦးရေဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနည်းစနစ် (တခြားနေရာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အသိပညာကွန်ယက်, 2008) ။ ဆယ်ကျော်သက်ပါဝင်ကဒီအထူးသဖြင့်လေ့လာမှုအဘို့အနညျးလမျးသုံးခုအတွက်အသိပညာ Networks ကစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာ (ကျပန်းဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်) မိမိတို့၏တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ် panel ကိုအပေါ်ဟောပြောဘူးသောသူ 18 နှစ်အရွယ်ဖြေဆိုသူစစ်တမ်း (ဎ = 335) ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း 52% ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာအသိပညာကွန်ယက်ကိုလည်း 13% ပြီးစီးသည့်စစ်တမ်းလက်ခံရရှိသူကို 17-792 တစ်နှစ်ကြားရှိ (ဎ = 70) ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး panel ကထိန်းသိမ်းထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ panel ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အိမ်သူအိမ်သားရှိကြ၏သူ panel ကိုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်ပေမယ့်ကိုလည်းစစ်တမ်း (ဎ = 491) ဖြည့်စွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, 16.8% စစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။ 16%% ဖြူ၏အမျိုးသမီးနှင့် 1.58 ခဲ့ကြသည်: ဖြေဆိုသူ 52 နှစ်ပေါင်းတစ်အတောအတွင်းအသက်အရွယ် (75 SD) ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖြေဆိုသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအောက်ပါအချက်များကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးခဲ့: "ဒီစစ်တမ်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအကြောင်းပြောနေတာသို့မဟုတ်ဖေါ်ပြခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်: hooking-Up / ထွက်အောင်; sexy အဝတ်အစားတွေ; ဗလာ; လိင် (ပါးစပ်, စအို, ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါဇာတ်); ဘေးကင်းလုံခြုံလိင် (ကွန်ဒုံး, မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု, etc); ။ လိင်ရာဇဝတ်မှုများ (မုဒိမ်းမှု) သို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း (လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ) "ဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြေဆိုသူကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဟုမေးခဲ့သည်:" အခုဆိုရင်ငါတို့သည်သင်တို့လိင်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့မီဒီယာကိုသုံးပါဘယ်လိုသိရန်လိုသည်။ အတိတ် 30 ရက်ပေါင်းစဉ်းစား: သင်တက်ကြွစွာအောက်ပါမီဒီယာများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်ဘယ်လောက်ကြည့်အဘယ်သူမျှမ "," အနည်းငယ်သော "," တချို့က "နှင့်" တစ်ဦးကအများကြီး "ဟုတုန့်ပြန်အမျိုးအစားခဲ့ကြသည်" "၏စာရင်း။ မီဒီယာရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, တေးဂီတသို့မဟုတ်ဂီတဗီဒီယိုများ, Playgirl သို့မဟုတ် Playboy နဲ့တူမဂ္ဂဇင်းများ, မဂ္ဂဇင်းများ၏အခြားမျိုး, ရုပ်ရှင်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, အွန်လိုင်းချက်တင်ခန်းနှင့် podcasts တွေကိုပါဝင်သည်။
လိင်အကြောင်းအရာ variable ကိုတစ်တုံ့ပြန်သူသို့မဟုတ်သူမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာသောညွှန်ပြရာမှသတင်းရင်းမြစ်များ၏အရေအတွက်ကဉျြးခြုပျအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်များအတွက်တစ်ဦးကရှာကြံ (ဆိုလိုသည်မှာတုံ့ပြန်တဲ့, နည်းနည်းအချို့ကိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုမှာရှာကြံသတင်းပို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်အများကြီးရှာကြံအစီရင်ခံ) ။ တန်ဖိုးများကို (/ အဘယ်သူမျှမရှာခြင်းမရှိရင်းမြစ်များမှဆည်းကပ်)0ထံမှ9(အားလုံးရင်းမြစ်များမှဆည်းကပ်) အားမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ "0" ၏တန်ဖိုးအဘယ်သူမျှမတက်ကြွရှာကိုယ်စားပြု, နှင့် "1" ၏တန်ဖိုးအထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်အနည်းဆုံး 1 (= .51 = .50, SD ကအဓိပ်ပာ) မှရှာကြံကိုယ်စားပြုနိုင်အောင်ဒီ variable ကိုတစ် dichotomized ဗားရှင်းကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ ။
pre-Coital နှင့် Coital အပြုအမူ
ငါတို့သည်လည်း (ယခင်သုတေသနအပေါ်အခြေခံ dichotomous Pre-coital အပြုအမူပစ္စည်းများအစုတခုအုပ်ချုပ်Jakobsen, 1997; O'Donnell အယ်လ် et al ။ , 2006; O'Sullivan et al ။ , 2007) ။ ဤပစ္စည်းများကို မှစ. , KR20 alpha ကိန်း (သုံးပြီးဆက်စပ်မှုစံနှစ်ဦးစလုံးထံမှအလွန်ကောင်းစွာခဲ့သည်ဆို၏, ဤ Pre-coital အပြုအမူတွေ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်Streiner, 2003) နှင့်တစ်ဦးအခက်အခဲအမိန့် (ဥပမာ Guttman စကေး) စံသုံးပြီး Loevinger ရဲ့ HH တစ်ဦး unobserved "အခက်အခဲ" ရှုထောင်တစ်လျှောက်တွင်အမိန့်ချမှတ်ခံရသည့်ပစ္စည်းများအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် unidimensionality တစ်ဦးအတိုင်းအရှည် (ကနဦးပျက်ကွက်ပြီးနောက်ပစ္စည်းများအားလုံးလည်းပျက်ကွက်နေကြပါတယ်နှင့်ကနဦးပျက်ကွက်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ပစ္စည်းလွန်ဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်Ringdal et al ။ , 1999) ။ အချက်တွေကိုဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သုံးပြီးစကေးလျှင်, ပင်ကိုယ်မူလအညွှန်းကိန်းရမှတ်ထက်လျော့နည်းပါသို့မဟုတ်လေ့လာရမှတ်ညီမျှအခက်အခဲ-အဆင့်ပစ္စည်းအရေအတွက်ကဖြတ်သန်းနှင့်လေ့လာရမှတ်၏တန်ဖိုးကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်အားလုံးအခက်အခဲ-အဆင့်ပစ္စည်းများကိုပျက်ကွက်ကိုက်ညီတဲ့။ Ringdal et al အဖြစ်။ (1999စာမကျြနှာ 27) ", အနှစ်ချုပ် ...H ဘာသာရပ်များတိကျစွာအားဖွငျ့အမိန့်ထုတ်နိုင်သည့်ဖို့ဒီဂရီတစ်ခုအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ပုံဖော်ကြ k ပစ္စည်းများ။ "
အဆိုပါပစ္စည်းများယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှုအတွက်အညီအမျှခက်ခဲ ရှိ. , တိုးမြှင့်အခက်အခဲ၏အမိန့်ရှိကြ၏: အတူ cuddled အဝတ်ကျော်ထိမိ, ထိမိခံရရင်သား / ရင်သားကိုထိမိ, ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများကိုထိမိ, အဝတ်အချည်းစည်းကိုမွငျလြှငျ, ကိုနမ်း, လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး, ပွေ့ဖက်လိုက်နဲ့ သူ့ကို / သူမ၏နှင့်အတူအဝတ်အချည်းစည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအညွှန်းကိန်း0ထံမှ9အရွယ်ရှိနှင့်ယောက်ျားပေါင်းများအတွက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို 4.03 (SD က = 3.06) နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် 4.54 ဖြစ်ခဲ့သည်။ (SD က = 3.06), နည်းလမ်းများအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်။ (ပျှမ်းမျှတွင်နမူနာများတွင်အမျိုးသမီးယောက်ျားထက်ထက်ဝက်ခန့်မှာတစ်နှစ်အသက်ကြီးရှိပါတယ်) ။ ထို့အပြင်နမူနာ၏ 19.6% အစဉ်အဆက်အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လိင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုမြီးကောင်ပေါက်များ၏ကိုးဆယ်သုံးရာခိုင်နှုန်းကို 16-18 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားဖြစ်ကြသည်။
ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးတစ်ခုအညွှန်းကိန်းလည်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးစီးပွားကိုတိုင်းတာရန်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Loevinger ရဲ့သုံးပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်တူညီသောလေ့လာမှုများနဲ့ (KR20 alpha သုံးပြီး) တစ်ဦးဆက်စပ်ကာမိန့်ထုတ်အခက်အခဲရှုထောင့်ကနေကောင်းကောင်းခဲ့သည်ဆို၏အချက်တွေကို (ထံမှပစ္စည်းကိုအသုံးပြု H) ။ အဆိုပါသာသနာကိုတိုးမြှင့်အခက်အခဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လိင်နှင့်ပစ္စည်းများကိုအကြားကွဲပြားခြားနားခဲ့ပါဘူးခဲ့ကြသည်: သင်, Romantic တစ်စုံတစ်ဦးကိုကြိုက်တယ်သင်လက်ဆောင်တွေဖလှယ်, စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစား, သင်တို့သည်အချင်းချင်းမေတ္တာစိတ်ကြေငြာ, သငျသညျလက်ရှိရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ရှိသည်, သငျသညျ သင့်ရဲ့ရင်ခုန်စရာ partner ၏များ၏မိဘများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဤသည်အညွှန်းကိန်း0ထံမှ6အရွယ်ရှိနှင့်ယောက်ျားပေါင်းများအတွက်ပျမ်းမျှ2ဖြစ်ခဲ့သည်။ 86 (SD က = 1.89) နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပျမ်းမျှ 3.29 (SD က = 1.98) ရှိ၏ ဤအနည်းလမ်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကစာရင်းအင်းသဘောရှိကြ၏။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာရှာဘို့ Integrated မော်ဒယ်ဆောင်ရွက်ချက်များ
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသီအိုရီအစီအမံခဲ့ကြသည်: ရည်ရွယ်ချက်: ဘယ်လိုဖွယ်ရှိ ?, "-30" "3" = အလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ် (:;3SD က -1.71 ပေမဲ့) မှ = အလွန်မဖြစ်နိုင်အဖြစ် coded သင်တက်ကြွစွာလာမည့် 1.83 ရက်အတွင်းမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်ကြည့်ရှုမည်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘောထားတွေ: နောက်လာမယ့်ရက် ၃၀ အတွင်းမီဒီယာမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုသင်တက်ကြွစွာရှာဖွေတာဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသလား အကဲဖြတ်ထုတ်ပြန်ချက်များမှာ semantic differential ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးရိုးရှင်းသော၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ မကောင်း၊ ကောင်းသည်၊ မိုက်မဲမှု / ပညာရှိ၊ မနှစ်သက်ဖွယ်၊ သာယာသော၊ ဆိုလို: -30; SD က: 3; အာလဖ = 3) ။ စံတန်ဖိုးဖိအား: ငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်နေသောလူအများစုကငါ / တက်ကြွစွာနေရမည်မဟုတ် "30" = သင့်ဖို့ "-3" = ထံမှ coded, လာမယ့်3ရက်အတွင်းမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်မကြည့်သင့်ပါတယ်သင့်တယ်, ငါကဲ့သို့သောလူအများစုဟာမထင် / တက်ကြွစွာ "-30" = တက်ကြွစွာ "3" = တက်ကြွစွာကြည့်ရှုတော်မူမည်ကို၎င်း, ငါနဲ့တူလူအများစုဟာ / တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်မကြည့်ကြဖို့ကိုကြည့်ကြမည်မဟုတ်အဖြစ် coded, လာမယ့်3ရက်အတွင်းမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်ကြည့်ရှုမည် "6" = မဟုတ် "1" = ရှိသည်ရှိသည်အဖြစ် coded အတိတ်7လအတွင်းမီဒီယာအတွက် (အဓိပ်ပာ: -1.17; SD က: 1.61; အာလဖ = 0.81) ။ self-ထိရောက်မှု: ; 30: ငါတကယ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါတက်ကြွစွာလာမည့်3ရက်အတွင်းမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာနိုင်ကြောင်းအချို့သောဖြစ်ကြောင်းကို, ငါနိုင်မရငါ (ဆိုလိုနိုင် "3" = အချို့သောမှအချို့သော "-1.42" = အဖြစ် coded SD က: 2.10) ။
ဖော်ပြရန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတက်ကြွစွာအသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံ၏ကြိမ်နှုန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့ Chi-စတုရန်းစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရလဒ်များမှအပြုအမူရှာကြံ related ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဆိုပါဆက်စပ်မှုလှုပ်ရှားမှုအဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက်အကြားအများအားဖြင့်ပိုပြီးပျံ့နှံ့သည်မည်မျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပမာကြောင့်အသက်အရွယ်-related ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်တင်ဆက်ထားပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်တက်ကြွစွာအပြုအမူအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာရှာကြံနှင့်အတူသမာဓိမော်ဒယ်စမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ Group မှဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မ interaction ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ Mplus လမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်အမျိုးအစားနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နှစ်ဦးစလုံးအာမခံနှင့်မှီခို variable တွေကိုနှင့်အတူမော်ဒယ်ဘို့ခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေ့လာဆန်းစစ်။
နမူနာငါးဆယ်-တစ်ရာခိုင်နှုန်းတက်ကြွစွာအနည်းဆုံးမီဒီယာအရင်းအမြစ်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 1, အများဆုံးအကြိမ်ရေနှင့်အတူကိုးကားအရင်းအမြစ်ရုပ်မြင်သံကြား, ဂီတ, ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, မဂ္ဂဇင်းများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, Playgirl / Playboy နဲ့တူမဂ္ဂဇင်းများ, အွန်လိုင်းချက်တင်ခန်းနှင့် podcasts တွေကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရုပ်ရှင်များ, ဖြစ်ခဲ့သည်။ အထီးအသီးသီးကိုမဆိုအမျိုးသမီးထက်အရင်းအမြစ် (63.4% နှင့် 39.5% ကနေရှာပိုပြီးကြ၏ χ2= 45.99, p <.05) နှင့်အထီးသတင်းရင်းမြစ် (t = 4.78, p <.05) ၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပျမ်းမျှအရေအတွက်ကနေရှာ၏။ မည်သည့်အရင်းအမြစ်မှမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည့်အရင်းအမြစ်များ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်တွင်သိသာထင်ရှားသောအသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုမရှိပါ (F = 0.76, df = 5, p = 0.58) ။
ရိုမန်းတစ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူလိင်အကြောင်းအရာ၏ Active ကိုရှာခြင်းငှါအသင်း
စားပွဲတင်2ဆက်ဆံရေးအပြုအမူစကေး pre-coital အပြုအမူစကေးနှင့်တစ်သက်တာအင်္ဂါဇာတ်လိင်: မဆိုအရင်းအမြစ်နှင့်3အပြုအမူရလဒ်များအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံ၏ bivariate ဆက်စပ်မှုတွေ့ရမယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဖို့မရှာတူညီတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အထူးသဖြင့်အသက်ငယ်အထီး, အထီးအဘို့အမြင့်မားအဆင့်ဆင့်မှာ Pre-coital အညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်ဆံရေးအပြုအမူအညွှန်းကိန်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ တစ်သက်တာအင်္ဂါဇာတ်လိင်ကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်မီဒီယာလိင်၏ရှာမြီးကောင်ပေါက်အဘို့အအားကောင်းခဲ့ပွီးလြှငျအကြားဆက်စပ်မှု 16-18 နှစ်ပေါင်း (r = .53) အသက်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆက်စပ်မှုထက်အသက် 16-18 (r = .30) ကူထီး။ သူတို့ရဲ့တသက်တာမှာအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံသတင်းပေးပို့သူဆယ်ကျော်သက်များ၏, 68% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အင်္ဂါဇာတ်လိင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသူဆယ်ကျော်သက်များ၏, 47% တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (χရှာသောအခါ2= 21.38, dF = 1, p <.05) ။
ခေတ် Group နှင့်ကျားများကကျကွှစှာမဆိုရင်းမြစ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒျအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာရှာ၏ Bivariate Polychoric ဆက်စပ်မှု,
ကျကွှစှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာရှာဘို့ Integrated မော်ဒယ်အားသုံးသပ်ခြင်း
မည်သည့်အရင်းအမြစ်ကနေသတင်းမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဖို့မရှာတက်ကြွစွာမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထွက်ရှာတစျဦးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကနေစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အတွက်လမ်းကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပုံ 1 လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ချက်များကိုသဘောထားများ၊ ပုံမှန်စံသတ်မှတ်ထားသောဖိအားများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုများကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အားလုံးဆက်ဆံရေးဟာ p <.05 အဆင့်မှာကစာရင်းအင်းသိသိသာသာရှိကြ၏။ The R2 သုံးယောက် Integrated မော်ဒယ်ပြုပြီထံမှရည်ရွယ်ချက်ကိုများအတွက် .60 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာရည်ရွယ်ချက်ကိုအကြီးအကျယ်, စံတန်ဖိုးအဖြစ် attitudinal ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဖြေဆိုသူအများစုကလည်းလုပ်ပေးရသောအခါ (β = -0.08) ရှာရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိရောက်မှု၏ဆိုးကျိုးများကိုမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည် မဟုတ် (မေးခှနျးအတှကျအပြုအမူဖျော်ဖြေဖို့ရည်ရွယ်Fishbein & Ajzen, 2010စာမကျြနှာ 66); နမူနာများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတိုင်းအတာ၏ပျှမ်းမျှ -1.71 ထံမှ +3တစ်စကေးအပေါ် -3 ခဲ့မှတ်မိသေးတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံအတွက်ကှဲလှဲ၏ခြောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကရှာရည်ရွယ်ချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ခံခဲ့ရသည်။
ကျကွှစှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ (N ကို = 784) ရှာအပေါ်ပေါင်းစည်းမော်ဒယ်အဘို့လမ်းကြောင်းကိုအားသုံးသပ်ခြင်းရလဒ်များ
Integrated မော်ဒယ် Group မှသုံးသပ်ခြင်း
ရှာနှင့်ရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်အကြေးခွံများအကြားဆက်စပ်မှုအတွက်ကျား, မ / အသက်အရွယ်အုပ်စုကွဲပြားမှုတစ်ခုအကျိုးစီးပွားသမာဓိမော်ဒယ်တစ်ဦး stratified လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်သတိပေးခံရ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်းနမူနာ (အောက်ပါလေးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့သည် စားပွဲတင် 2): အသက်အရွယ် 13-15 ကူထီး (ဎ = 153), အသက်အရွယ် 16-18 (ကူထီးဎ = 219), အမျိုးသမီးအသက်အရွယ်မရွေး 13-15 (ဎ = 132), နှင့်အမျိုးသမီးအသက်အရွယ်မရွေး 16-18 (ဎ = 280) ။ အဆိုပါကိန်း၏အရွယ်အစားကွဲပြားသော်လည်း, ပုံစံတစ်ခုချင်းစီကိုအုပ်စုတူရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသည်ရည်ရွယ်ချက်အဓိကအားသဘောထားများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရိပ်မိစံတန်ဖိုးဖိအား, နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးလေးယောက်အုပ်စုများအတွက်အပြုအမူတွေကိုရှာကြံခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ တခြားနားချက်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုနှင့်အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး, မဟုတ်တော့အုပ်စုများတွင်မဆိုကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကြ၏။ ခဲ့ ဒါကမော်ဒယ်အပြည့်အဝနမူနာ run သောအခါနှိုင်းယှဉ်မှုအုပ်စုများအတွက်သေးငယ်နမူနာအရွယ်အစားဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ χ: အပြည့်အဝနမူနာအဖြစ်မကောငျးပေမယ့်အုပ်စုမော်ဒယ်များအတွက်မထိုက်မတန်စာရင်းဇယား, ကောင်းသောခဲ့ကြသည်2= 11.340, DF = 7, p = .12; RMSEA = 0.06; CFI = 0.99; TLI = 0.97 ။
မြီးကောင်ပေါက်တက်ကြွစွာမီဒီယာသတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်ရုပ်ရှင်များ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဂီတ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းပဲရှိတယ်။ အစီရင်ခံရှာကြံနှင့်တိကျတဲ့မီဒီယာကနေရှာကြံ၏ပမာဏအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ အထီးရှိသမျှတို့ကိုမီဒီယာကိုဖြတ်ပြီးအမျိုးသမီးထက်ပိုရှာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကအသီးသီး, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များ, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကနေရှာကြံရောက်လာသောအခါယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားကွာခြားချက်များအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒါလုပ်နေတာများအတွက်ဖြေဆိုသူ '' အကြောင်းပြချက်ဖော်ထုတ်သည်ဤဒေတာကနေဖြစ်နိုင်သမျှမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပါတယ်။ ဒါဟာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းလိင်အကြောင်းအရာရှာကြံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်တွန်းအားရှိစေခြင်းငှါရှာကြံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပေးထားလည်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာယောက်ျား '' ရှာသူတို့ကပိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမီဒီယာစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်အသီးသီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအပြုအမူတွေ, Pre-coital အပြုအမူတွေနှင့်တစ်သက်တာအင်္ဂါဇာတ်လိင်ရှာကြံအကြားအသင်းအဖွဲ့များ, တူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏အမျိုးသမီးမှနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာနှစ်ဦးစလုံးအသက်ငယ်နှင့်အထက်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအကြား သာ. ကွီးမွတျခဲ့သညျ။ ရှာနှင့်အင်္ဂါဇာတ်လိင်အကြားဆက်စပ်မှုကြောင့်လိင်ဆက်ဆံသတင်းပေးပို့သူကို 13-15 တစ်နှစ်ကြားရှိ၏သေးငယ်တဲ့နမူနာရန်တွက်ချက်မရနိုင်ပေမဲ့, ရှာအထီးနှင့်အငယ်မြီးကောင်ပေါက်ပိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုကိုအချက်များပေါင်းစပ်၏ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ,: မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထိတွေ့မီဒီယာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလွယ်ကူစွာထိခိုက်, အဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက်နှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး၏ကိုဤလောကသို့စတင်များ၏အချိန်ကိုက်နှိုင်းယှဉ်ငယ်ရွယ်သောမြီးကောင်ပေါက်အပေါ်ပိုမိုကြီးမားအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြုပြင်။ စုဆောင်းဒေတာ Cross-Section ကြောင့်သို့သော်, ဤအသင်းအဖွဲ့များ၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ပါတယ်။
မြီးကောင်ပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းရင်းသတင်းအချက်အလက်-စုရုံးမှမိမိတို့အပြုအမူများအတွက်စံတန်ဖိုး validation ကိုရှာကြံအထိကွဲပြားလိမ့်မည်။ လိင်ကတက်ကြွလူငယ်လည်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့လိင်အကြောင်းကိုသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးကဲ့သို့သောအခြားလူမှုရေးသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေမီဒီယာလိင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်။ တက်ကြွစွာထို့ကြောင့်ထိတွေ့ရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထုတ်ရှာကြံ။ လူငယ်သူတို့ကထွက်ငှါရှာကြံသောကြောင့်လိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်ရှာကြံခြင်းမရှိဘဲမီဒီယာလိင်ထိတွေ့နေသောအခြားသူများထက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောလူငယ်ကြောင့်တိုးလာရင်ခုန်စရာနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပိုမိုလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ပြင်ဆင်. နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကြားဝင်၏အရှင်ပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံအခြေခံသောတိကျသောအမူအကျင့်ယုံကြည်ချက် Indentifying လည်းအရေးကြီးသည် (Fishbein & Yzer, 2003) ။ (ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနှင့်ဝသကဲ့သို့Albarracín et al ။ , 2001; Sheeran & Taylor, 1999), ဆေးလိပ်သောက် (ဗန် De အရှင် et al ။ , 2007), လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု (Hagger et al ။ , 2001;Hausenblas, Carron & Mack, 1997), ကျန်းမာစား (Conner, -Norman & ဘဲလ်, 2002), Bing သောက်သုံး (Cooke, Sniehotta & Schüz, 2007) နှင့်အခြားကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေ (Hardeman et al ။ , 2002), တက်ကြွစွာမီဒီယာအရင်းအမြစ်မဆိုအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံတက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထွက်ရှာတစျဦးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကနေစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ လမ်းကြောင်းကိုဆန်းစစ်ရာမှရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာရည်ရွယ်ချက်သဘောထားတွေ, ရိပ်မိစံတန်ဖိုးဖိအား, နှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာရည်ရွယ်ချက်ကိုအဓိကအားစံတန်ဖိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်: တုံ့ပြန်သိသိသာသာကိုအခြားသူများလုပ်နေတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သိသိသာသာအခြားသူများတုံ့ပြန်ဘာလုပ်သင့်စဉ်းစားနေကြသည်ထင်သောအရာကို။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့သုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာစုစုပေါင်းထိတွေ့မှုအတွက်ကှဲလှဲ၏မည်မျှမသိရပါဘူးအပြုအမူရှာကြံကတာဝန်ယူသည်။ ဤသည်မှာအနာဂတ်သုတေသနနှင့်အတူစူးစမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်တဲ့အရေးပါတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရဲ့အလုံးစုံထိတွေ့မှု၏သိသာထင်ရှားသောပမာဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအကောင့်ရှာကြံလျှင်, ငါတို့သည်ကြောင်းထိတွေ့နေတဲ့ Self-ညွှန်ကြားအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်ယူဆနှင့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အတည်ပြုဘို့လိုအပ်ကြောင်းအားဖြင့်လှုံ့ဆော်, မီနှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအပြီးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင် အပြုအမူ။ အခြို့သောမီဒီယာတစ်ခုရှိခြင်း, နောက်ခံ on "" အခါနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့, မီဒီယာလိင်မှထိတွေ့မှုကောင်းစွာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏တက်ကြွစွာရှာခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကဲ့သို့သောအခြားအချက်များပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ရာ၏ထိတွေ့ခြင်းမော်ဒယ်များ (ဥပမာခန့်မှန်းမရလျှင် အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အခြားမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်မိသားစုမူဝါဒများ) ပိုမိုသောအချက်အလက်များပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသုတေသနအချို့န့်အသတ်ရှိပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အခြေခံ (နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်) သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံဖို့စပ်ဆိုင်သောအအဖြစ်သဘောထား, စံတန်ဖိုးဖိအား, နှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုသော, အမူအကျင့်စံတန်ဖိုးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုယုံကြည်ချက်ဤလေ့လာမှုအားဖြင့်ဖော်ထုတ်မခံခဲ့ရပါ။ ရလဒ်သမာဓိမော်ဒယ်ကိုအောင်မြင်စွာအပြုအမူရှာကြံဟောကိန်းထုတ်, အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြောင်းညွှန်ပြနေချိန်တွင် အဘယ်ကြောင့် မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' ရှာဖွေရေးပြုလုပ် (နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ရှာအပြုအမူကိုရှာခြင်းနှင့်အရှင်မှတဦးတည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခြေခံကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ, အပြုအမူစံတန်ဖိုးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုယုံကြည်ချက်သိရန်လိုအပ်Fishbein & Ajzen, 2010) ။ ထို့အပြင်နမူနာအများစုအဖြူရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးအမေရိကန်-အာဖရိကနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်လူငယ်နှင့်အတူတစ်ဦးကနမူနာသောဤပုံစံများကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံဖြတ်ပြီးကြည်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်နှင့်ငွေကြေးအခက်အခဲများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမှထိတွေ့မှု၏အစီအမံစုဆောင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါခဲ့ကြသည်။ အကျဉ်းချုပ်မှာတော့ဆယ်ကျော်သက်တက်ကြွစွာမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာကြံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အရာတက်ကြွစွာရှာမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်မှအတိုင်းအတာမသိပေမယ့်အဲဒီရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' စုစုပေါင်းထိတွေ့ခန့်မှန်းသောအရာကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်မှုနှငျ့ဆအဖြစ်ထိတွေ့မှု / အပြုအမူဆက်ဆံရေးမျိုးကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးမြားတှငျပါဝငျခွငျးကဲ့သို့သောအခြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ။
Abelman R. ဘာသာရေးနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏ဂျာနယ်။ 1987; 31: 293-307 ။
Albarracín: D, ဂျွန်ဆင် BT, Fishbein M က, Muellerleile PA ဆိုပြီး။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုမော်ဒယ်များအဖြစ်နှီးနှောအရေးယူမှုနှင့်စီစဉ်ထားသည့်အပြုအမူ၏သီအိုရီ: Meta-analysis သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 2001; 127 (1): 142-161 ။ [PubMed]
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုမှဖြစ်ပျက်ကဘာလဲ Albarran တစ်ဦးက, အန်ဒါဆင်ကို T, Bejar L ကို, Bussart တစ်ဦးက, Daggert အီး, Gibson က S, Gorman M က, Greer: D, Guo က M, Horst J ကို, Khalaf T က, လေးဂျေ, McCracken က M, Mott B, Way ကိုအိပ်ချ် ? ရေဒီယိုနှင့်လူငယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်အသုံးပြုသူများအကြားနည်းပညာအသစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်။ ရေဒီယိုလေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2007; 14: 92-101 ။
Annenberg မီဒီယာ Exposure သုတေသနအဖွဲ့ (AMERG) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူမီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းအစီအမံချိတ်ဆက်ခြင်း: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ။ 2008;2(1): 23-42 ။
Ashby S က, Arcari ကို C, Edmonson ခရုပ်မြင်သံကြားငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်၏အန္တရာယ်။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာ၏မော်ကွန်း။ 2006; 160: 375-380 ။ [PubMed]
Aubrey J ကို, Harrison K ကို Kramer က L, Yellin ဂျေအရောင်းသွက်အချိန်ကိုက်နှိုင်းယှဉ်: လိင် oriented ရုပ်မြင်သံကြားမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများက '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန။ 2003; 30 (4): 432-460 ။
Bleakley တစ်ဦးက, Hennessy M က, Fishbein M က, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်လိင်အကြောင်းကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ယုံကြည်ချက်မှပြောပြတယ်ဘယ်လိုယော်ဒန်မြစ်အေ။ ကနျြးမာရေးအပြုအမူ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2009; 33 (1): 37-48 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bleakley တစ်ဦးက, Hennessy M က, Fishbein M က, ဂျော်ဒန်အေဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအလုပ်လုပ်တယ်: မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး။ မီဒီယာစိတ်ပညာ။ 2008; 11 (4): 443-461 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bradner ကို C, Ku L ကို, Lindberg အယ်လ်အသက်ကြီးပေမယ့်မပေးပညာရှိ: ဘယ်လိုယောက်ျား AIDS ရောဂါအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့်လိင်အထက်တန်းကျောင်းအပြီးရောဂါများကူးစက်။ မိသားစုစီမံကိန်းပတ်သ က်. ။ 2000; 32: 33-38 ။ [PubMed]
ဘရောင်း J ကို, မျက်နှာသစ်အက်စ်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လိင်တူချစ်ခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1991; 21: 77-91 ။ [PubMed]
ဘရောင်း JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo, G, Kenneavy K ကို Jackson က C. Sexy မီဒီယာကိစ္စ: ဂီတ, ရုပ်ရှင်, တီဗီ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Exposure ကျောဖြူမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2006; 117 (4): 1018-1027 ။ [PubMed]
နောက်ခံသမိုင်းနှင့် RAND ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို: ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အမေရိကန်လူငယ်အပေါ်ရိုက်ခတ်မှု Collins R. လိင်။ ကလေးနှင့်မြောက်အမေရိက၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ 2005; 14: 371-385 ။ [PubMed]
Collins R ကို, Elliot M ကို, မီဒီယာသက်ရောက်မှုမှ Miu အေချိတ်ဆက်ခြင်းမီဒီယာအကြောင်းအရာ: အဆိုပါ RAND ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင် (TAS) လေ့လာမှု။ ခုနှစ်တွင်: ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဦးက, Dunkle: D, Manganello J ကို, Fishbein M က, အယ်ဒီတာများ။ မီဒီယာမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2009 ။ လာမည့်။
ကှတျချ R ကို, Sniehotta က F, Schüzခသုံးပြီးမူးရူး-သောက်သုံးအပြုအမူကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် TPB တိုးချဲ့: မျှော်လင့်နောင်တနဲ့ဖော်ပြရန်စံချိန်စံညွှန်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်။ အရက်နှင့်အရက်။ 2007; 42: 84-91 ။ [PubMed]
Conner M က,-Norman P ကို, ဘဲလ် R. စီစဉ်ထားအပြုအမူနှင့်ကျန်းမာစား၏သီအိုရီ။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ။ 2002; 21: 194-201 ။ [PubMed]
Fishbein M က, Ajzen ဗြဲကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အပြုအမူပြောင်းခြင်း: အကြောင်းပြချက်လှုပ်ရှားမှုချဉ်းကပ်။ တေလာနဲ့ Francis; နယူးယောက်: 2010 ။
ထိရောက်သောကျန်းမာရေးအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်ဒီဇိုင်းသီအိုရီကိုသုံးပြီး Fishbein M က, Yzer အမ်။ ဆက်သွယ်ရေးသီအိုရီ။ 2003; 13 (2): 164-183 ။
Hagger M က, Chatzisarantis N ကို, Biddle S က, သားသမီးရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရည်ရွယ်ချက်နှင့်အပြုအမူ၏ Orbell အက်စ် Antecedents: ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုနှင့် longitudinal ဆိုးကျိုးများ။ စိတ်ပညာနှင့်ကျန်းမာရေး။ 2001; 16: 391-407 ။
Hardeman W က, Johnston က M, Johnston: D, Bonetti: D, Wareham N ကို, အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရေးအတွက်စီစဉ်ထားအပြုအမူများ၏သီအိုရီ၏ Kinmonth အေလျှောက်လွှာ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ စိတ်ပညာနှင့်ကျန်းမာရေး။ 2002; 17 (2): 123-158 ။
Hausenblas HA, Carron AV စနစ်, Mack DE ။ အပြုအမူကိုလေ့ကျင့်ဖို့နှီးနှောအရေးယူမှုနှင့်စီစဉ်ထားသည့်အပြုအမူ၏သီအိုရီ၏လျှောက်လွှာ: Meta-analysis သည်။ အားကစားနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1997; 19 (1): 36-51 ။
Hennessy M က, Bleakley တစ်ဦးက, Fishbein M က, Busse P. ဗီရိုအမှားမှသင့်လျော်သောစည်းမျဉ်းတုံ့ပြန်မှုကဘာလဲ? တီဗီလိင်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုအဘို့အ Fining ဘူတာ။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏ဂျာနယ်။ 2008; 52: 387-407 ။
Hennessy M က, Bleakley တစ်ဦးက, Fishbein M က, ဂျော်ဒန်အေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့ကိုခနျ့မှနျး။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်။ 2009; 46: 586-596 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား noncoital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအတွက်တိုးတက်မှု၏ Jakobsen R. ဇာတ်စင်: အ Mokken စကေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း application တစ်ခု။ အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 1997; 27: 537-553 ။
Katz အီး, Blumler J ကို, Gurevitch အမ်အသုံးပြုနှင့်သုတေသန gratifications ။ ပြည်သူ့ထင်မြင်ချက်လပတ်။ 1973; 37: 509-523 ။
Katz အီး, တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆက်သွယ်ရေး Blumler J ကို, Gurevitch အမ်အသုံးချ။ ခုနှစ်တွင်: Blumler J ကို, Katz အီး, အယ်ဒီတာများ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆက်သွယ်ရေး၏အသုံးပြုမှု: ဆန္ဒပြည့်သုတေသနအပေါ်လက်ရှိအမြင်များ။ sage; Beverly Hills မှာ: 1974 ။ စစ။ 19-32 ။
ကင်မ်ဂျေ, Collins R ကို, Kanouse: D, Elliott သည် M က, Berry ဟာက S, Hunter က S, Miu အေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစေတနာ, အိမ်သူအိမ်သားမူဝါဒများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှု၏အခြားခန့်မှန်း။ မီဒီယာစိတ်ပညာ။ 2006; 8: 449-471 ။
အသိပညာကွန်ယက်ဖျော်ဖြေမှုအစီရင်ခံစာ: Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဘို့ကောက်ယူအေအိုင်ဒီအက်စ်-related အပြုအမူအပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်စစ်တမ်း။ Menlo Park, CA: 2008 ။
ko H ကို, ချိုကို C ရောဘတ်အမ်ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်။ Advertising ကြော်ငြာ၏ဂျာနယ်။ 2005; 34: 57-70 ။
သည် L'Engle KL, ဂျက်ဆင်ကို C, Brown က JD ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းစတင်စောစောမြီးကောင်ပေါက် '' သိမြင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အမြင်များ။ 2006; 38 (2): 97-105 ။ [PubMed]
O'Donnell, L, Stueve တစ်ဦးက, Wilson က-Simmons R ကို, မြို့ပြငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား K ကို Agronick, G, Jean Baptiste V. လိင်ကွဲအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ Dash ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 87-109 ။
O'Sullivan LF, Cheng ဟာ ​​MM, Harris က KM, Brooks-ဂွန်ဂျေငါဘာတစ်ခုမှသင်၏လက်ကိုကိုင်ထား: ဆယ်ကျော်သက်ဆက်ဆံရေးအတွက်, လူမှုရေးရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏တိုးတက်မှု။ လိင် Reprod ကျန်းမာရေးရှုထောင့်။ 2007; 39 (2): 100-107 ။ [PubMed]
Papacharissi Z ကို, အဖြစ်မှန်အယူခံဝင်၏ Mendelson အေတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု: အဖြစ်မှန်တီဗီရှိုးများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆန္ဒပြည့်။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏ဂျာနယ်။ 2007; 51: 355-370 ။
Pardun C၊ L'Engle K၊ Brown J. Linking သည်ရလဒ်များနှင့်ထိတွေ့မှု - မီဒီယာခြောက်ခုတွင်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုစားသုံးခြင်း။ Mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ 2005; 8 (2): 75-91 ။
Ringdal, G, Jordhøy M က, Kaasa အက်စ် palliative စောင့်ရှောက်မှု၏အရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း: အ FAMCARE စကေး၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဘဝကသုတေသနအရည်အသွေး။ 2003; 12: 167-176 ။ [PubMed]
Ringdal K ကို Ringdal, G, Kaasa S က, Bjordal K ကိုWisløffက F, Sundstrøm S က, Hjermstad အမ်ဟာ HRQoL ၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုတွေကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ် Mokken မော်ဒယ်အားဖွငျ့လူဦးရေဖြတ်ပြီး EORTC QLQ-C30 အတွင်း scales ။ ဘဝကသုတေသနအရည်အသွေး။ 1999; 8: 25-43 ။ [PubMed]
Rubin ကအေမီဒီယာသက်ရောက်မှု၏ရှုထောင့်-and ဆန္ဒပြည့်အသုံးပြုသည်။ ခုနှစ်တွင်: Bryant J ကို, Zillman: D, အယ်ဒီတာများ။ မီဒီယာသက်ရောက်မှု: သီအိုရီနှင့်သုတေသနတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ လောရင့် Erlbaum; Mahwah: 2002 ။ စစ။ 525-548 ။
Ruggiero T. 21 ရာစုအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆန္ဒပြည့်သီအိုရီ။ Mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ 2000;3(1): 3-37 ။
Slater အမ်လိမ်အားဖြည့်: မီဒီယာကို select နှင့်မီဒီယာသက်ရောက်မှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းအမူအကျင့်များနှင့်လူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဆက်သွယ်ရေးသီအိုရီ။ 2007; 17: 281-303 ။
Sheeran P ကို, တေလာအက်စ်ကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: တစ် Meta-analysis သည်နှင့်နှီးနှောအရေးယူမှုနှင့်စီစဉ်ထားသည့်အပြုအမူ၏သီအိုရီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ အသုံးချလူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1999; 29: 1624-1675 ။
Somers CL, Tynan JJ ။ multiethnic တွေ့ရှိချက်: ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ content ၏စားသုံးမှု။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ 2006; 41 (161): 15-38 ။ [PubMed]
Streiner ဃအစပိုင်းမှာစတင်ခြင်း: alpha နှင့်ပြည်တွင်းကိုက်ညီမှု coefficient တစ်ခုမိတ်ဆက်စကား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်။ 2003; 80: 99-103 ။ [PubMed]
ဗန် De အရှင် M က, Rutgers အီး, Otten R ကို, asthmatic နှင့် Non-asthmatic မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်းခန့်မှန်းစီစဉ်ထားအပြုအမူများ၏သီအိုရီဗန် Den Eijnden R. တစ်ဦးက longitudinal စမ်းသပ်။ အပြုအမူဆေးပညာဂျာနယ်။ 2007; 30: 435-445 ။ [PubMed]
ရပ်ကွက်အယ်လ်ရုပ်မြင်သံကြားထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' သဘောထားများနှင့်ယူဆချက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား? ဆက်စပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်အတည်ပြုချက်။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 2002; 31: 1-15 ။
လမ်းညွှန်အဖြစ်တီဗီအသုံးပြုခြင်းရပ်ကွက် LM, Friedman K. : ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအကြားအစည်းအရုံးများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2006; 16 (1): 133-156 ။